कोरोना सङ्क्रमितसँग मुख्यमन्त्रीको टेलिफोन संवाद, युवतीले भनिन 'डाक्टर कोठामै छिर्दैनन्' - Pokhara News
पोखरा । बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमित युवतीसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्वास्थ्यवस्थाको बारेमा कुराकानी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले एक भिडियो समेत सार्वजनिक गर्दै कोरोना संक्रमित बागलुङकी युवतीको स्वास्थ्यवस्थाबारे मुख्यमन्त्री गुरुङले आज बिहान टेलिफोनमार्फत कुराकानी गरी उनको स्वास्थय अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको बताएका छन् ।
टेलिफोनमा मुख्यमन्त्री गुरुङले उनलाई नआत्तिकन आत्मबल बढाएर उपचारमा रहन आग्रह गर्दै निख्रेपछि मात्र घर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सङ्क्रमित युवतीले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको बताएकी छन् ।
तर कुराकानीका क्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले डाक्टर दिनमा कतिपटक आउनुहुन्छ भनि युवतीलाई गरेको प्रश्नमा उनले डा. कोठामा नआउने गरेको जानकारी दिइन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले दोहोर्याएर सोधेको प्रश्नमा समेत उनले डा. नआएको नै बताइन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रश्नको जवाफमा उनले भनेकी छन्, ‘हेर्न आउनु हुन्न । फोन गर्नुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले आफूले डाक्टरसँग दिनहुँ उनको स्वास्थ्य अवास्थाका वारेमा कुराकानी गरेको उल्लेख गर्दै युवतीलाई सान्तवना दिएका छन् ।
यही चैत ४ गते बेल्जियमबाट कतार हुँदै काठमाण्डौ आएकी उनीसँग बेल्जियमबाटै आएकी बागलुङ कै ६५ वर्षीया एक अर्की महिलालाई समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि अहिले उनी पनि सोही अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा उपचार गराइरहेकी छन् ।
युवतीको अवस्था सामान्य रहेको उपचारमा संलग्न डा प्रदीप श्रेष्ठले बताएका छन् । ६५ वर्षीया महिलामा पहिले देखिनै दम र रक्तचाप समस्या रहेको बताइएको छ ।